Teeling Vintage Reserve 21 Unyaka Old Irish Whiskey
Teeling Vintage Reserve 21 Unyaka Old Single Malt Irish Whiskey – I-Silver Bottling
30 Novemba 2014
Ukuzwa kuthathe ingcosana 21 U-Year Old single Malt I-Whisky yase-Ireland yasakazwa ngaphakathi 1991 futhi ngiwuniké omunye unyaka nokuvuthwa e Sauterne Iwayini emiphongolweni ngaphambi bottling nganoma 46% ABV. Lokhu Teeling Reserve Vintage Isiliva Bottle Isichasiselo kuyinto batch encane I-Whisky yase-Ireland ikhawulelwe nje 5,000 amabhodlela.
Teeling Vintage Reserve 21 Unyaka Old Irish Whiskey. Ngokumangalisayo bushelelezi kancane 21 Unyaka Old Teeling Irish Whiskey.
Teeling Vintage Reserve 21 Unyaka Old Single Malt Irish Whiskey
Ngifundile ezinye Izibuyekezo lokhu 21 Unyaka Old Single nami Malt kazi base kokuhlaziya nogologo efanayo kimi? Lokhu kungumnikelo ophekiwe futhi oyingqayizivele ovela kuTeeling ongahambelani kalula kunoma iyiphi yamamodeli akhona e-Irish Whiskey.
Kwahlakazwa ekuqaleni 1991 ngenani elincane lobuthi obunamantongomane elingezwe ku-mashbill. Kwakuyiminyaka ubudala 21 iminyaka kuma-Bourbon Casks ngaphambi kokuqedwa unyaka eSauterne Wine Casks. Yabe isibhotshwa yiTeeling Brothers (UJack noStephen) ngoJulayi 2013 njengokukhishwa Okuncane Kwebatch 5,000 amabhodlela.
Teeling Vintage Reserve 21 Unyaka Old Single Malt Irish Whiskey – Stuart sika zokuhlolwa Amanothi
Ikhala: I-oki enamandla ne-vanilla ejulile enamacebo okhuni olushisiwe, mnene, uju omnyama kanye nama-marmalade asikiwe.
Nambithani: Luscious, umlomo ogcwele ukhilimu omuncu uzwakala ngesinongo esifudumele esixubile.
Qeda: Isikhathi eside ngesinongo esivumela i-malt eyindilinga ejulile futhi nje ithikili kasawoti ngemuva kokunambitha.
Ngiqale ukunambitha iTeeling Vintage Reserve 21 Nginonyaka ngonyaka edlule ngenkathi ngidlula esikhumulweni sezindiza eDublin lapho ngidlula ngibuyele ekhaya lami elisha eBrussels. Kwangimangaza ukukhumbula okufudumele kodwa okukhanyayo komuntu osekhulile, kodwa ukholwe kancane iStarbank.
Ngiyithandile kakhulu kangangokuthi ngithandazile ngokushesha wathenga amabhodlela ambalwa ngazitholela abanye abangane. Empeleni, Ngiqeda iconsi lokugcina ngenkathi kubhalwa lokhu kubuyekezwa!
Ngiyaziqhenya ngokuzibika njenge- “owokutholwa wokuqala nompetha” yale nkampani entsha ejabulisayo yase-Irish Whisky njengoba ngisanda kuqaphela ukuthi ibhodlela lami lokugcina elisele yiNombolo yeBhodlela 361 ka 5,000!
Lokhu kakhulu, kakhulu, i-Whisky ekhethekile yase-Ireland, engicabanga ukuthi inawo wonke amamaki wesifundo esizayo. Bengihlala ngizwa ukuthi i-cask yeviniga isiqedela ukusebenza kangcono kwisibani, chassis ongathathi hlangothi kakhudlwana wokusanhlamvu okukhulile kahle. Ngokunambitheka okuthe xaxa kwamawayini aqinile njengeSherry nePort, Kungaba lula impela “pheka ngaphezulu” qeda ngokuyishiya isikhathi eside kakhulu. Kepha hhayi ngamakhabethe ewayini abhanqwe ne-Malt endala futhi eqinile enjengale (IMHO).
Ngenkathi abakwaSauterne beqeda ukuboleka ubumnandi bese bancibilikisa imalt eyodwa enhle kakhulu, Nginomuzwa wokuthi leli dayimane le-whisky lase-Ireland elineminyaka engu-21 lingapuluswa lize liphelele kakhudlwana. Kungakujabulisa ukubona ukuthi yimuphi omunye unyaka noma emibili noma ngaphezulu kumaSauterne Casks angangeza kuphrezentheshini enhle kakhulu ukuletha ukujula okukhulu kakhulu kwezinhlamvu ezicebile nopolishi.
Ekugcineni, yize lokhu kubuyekezwa kumayelana ne-whisky, Kufanele futhi ngikhulume ikhwalithi yokwethulwa kokwakhiwa kwamabhodlela, isitobha, ilebula, ibhokisi lokubonisa ibhodlela lezinkuni kanye nebhokisi lokufaka. Kwenza ngempela isipho esihle kakhulu se-Irish Whisky esiningi “Feel Good” isici!
Njengoba ngishilo, Sengivele ngizithengele ezimbili futhi ezintathu njengezipho zenhlangano yabangane eBrussels. Isikhathi sokuqalisa kabusha!
Akuvamile, uthola ukuthenga ucezu lwangempela lomlando we-whisky ekwenzeni.
Teeling Vintage Reserve 21 Unyaka Old Single Malt Irish Whiskey Iqiniso Ifayela
I gama le-brand: Teeling Irish Whiskey
Igama: Teeling Vintage Reserve 21 Unyaka Old Single Malt Irish Whiskey
Isitatimende Ubudala: 21 Iminyaka
ehlungiwe: Non Chill ehlungiwe
Uhlobo Whisky: Single Malt Irish Whiskey
Uhlobo Cask: Ivuthwe ngemigqomo ye-bourbon ex 21 Iminyaka kanye Iphele unyaka owodwa e Sauterne Iwayini emiphongolweni.
Pooka Scale: Four phezu Pooka Scale
Teeling Vintage Reserve 21 U-Old Old Malt I-Whisky wase-Ireland onama-Sauterne Cask Finish uyi-Pooka Emine, I-Super Premium Irish Whisky.